Ungasisebenzisa kanjani isizinda esibonakalayo kumakholi wevidiyo we-Zoom | Izindaba zamagajethi
Ungasisebenzisa kanjani isizinda esibonakalayo kumakholi wevidiyo we-Zoom
URafa Rodríguez Ballesteros | | Aplicaciones, Izifundiswa
Siyaqhubeka nokusebenzisa okuningi kakhulu kunalokho esasikucabanga ngezicelo zamakholi wevidiyo. Zoom bekulokhu, selokhu kwaqala ukuboshwa kwasekhaya okuphoqelekile, omunye wabasebenzisi ababhaliswe kakhulu emhlabeni jikelele. Yize amahemuhemu nezindaba ezithile (okuthiwa zingezangempela) ngezinkinga ezithile zokuphepha azethule zigcine zimlimazile. Iqiniso ukuthi lisenabasebenzisi abaningi abasebenzayo abasebenzisa i-App ukuxhumana kwabo kwansuku zonke.
Namuhla sikulethela a okokufundisa okufishane ukusebenzisa ithuluzi lokufuna ukwazi nelisebenziseka kakhulu. Ngalesi telework, akubona bonke abakwenzayo abanesikhala esenzelwe le njongo. Abaningi kuye kwadingeka badonse izingqondo zabo futhi balimise ihhovisi ekhoneni lendlu lamahhala. Y lapho senza amakholi evidiyo, ikakhulukazi ezingeni lobuchwepheshe, Akubukeki kahle ukubona umbhede wethu, ikhishi noma igalaji ngemuva lapho kudingeke ukuthi sithole khona.
1 Ingemuva lamakholi akho evidiyo ngeke lisaba igumbi lakho
2 Yenza kusebenze isizinda esibonakalayo ku-Zoom igxathu negxathu
3 Lapho siqala ucingo noma sijoyina
4 Ukulungiswa okulula ukunikeza isithombe esingcono
Ingemuva lamakholi akho evidiyo ngeke lisaba igumbi lakho
Zoom usinikeza kungenzeka ukusebenzisa isizinda esibonakalayo okuzosivumela ukuthi sinikeze isithombe sobungcweti kakhulu kumakholi wevidiyo. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuzophinda futhi kuvikele ngokwengxenye ubumfihlo bekhaya lethu nokuthi akekho ngempela okufanele abone ukuthi sikuphi. Uma indawo osebenzela kuyo, noma indawo lapho uke wafaka khona okokusebenza kwakho (ezokungcebeleka) ayinayo imvelaphi enhle yamashelufu ezincwadi agcwele izincwadi ezinhle, uzolithanda leli thuluzi.
Uma sizobamba ingqungquthela ebalulekile yomsebenzi noma yebhizinisi kubaluleke kakhulu ukuxhumana okuhle, ukuthi sinokuhle umsindo. Kubalulekile futhi ukuthi ku ukubiyela ividiyo sibukeka sibekeke kahle. Y futhi kuyinto imininingwane okufanele icatshangelwe ingemuva lesithombe esizobonwa ngumxhumanisi wethu. Njengoba sisho, abaningi akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokuzibeka lapho kunegebe khona, kepha ukuba nomshini wokuwasha ngemuva akubukeki kahle, akunjalo?
Kwezinye izinhlelo zokusebenza zokushaya izingcingo ezisungulwe njenge Skype sesivele sinayo i- inketho yokwengeza ingemuva elibonakalayo. Futhi leli yilo kanye ithuluzi elihlinzekwa yi-Zoom futhi namuhla esizochaza ngalo ukuthi lisetshenziswa kanjani. Ukubeka isizinda esibonakalayo kumakholi ethu wevidiyo kuzosiza abaxhumana nathi ukugxila kithi nakulokho esizokusho. Futhi akusadingeki ukhathazeke ngengxenye yendlu engabonakala.
Uma ungakalandi uhlelo lokusebenza lwemfashini lwamakholi wevidiyo lapha sikushiyela i- isixhumanisi sokulanda se-iOS:
ZOOM Cloud Imihlangano
Futhi lapha ukuze ulande i-App uma ukhona Umsebenzisi we-Android:
Imihlangano yamafu ye-ZOOM
Yenza kusebenze isizinda esibonakalayo ku-Zoom igxathu negxathu
Si isizinda esibonakalayo samakholi wakho wevidiyo yilokho okudingayo Sichaza igxathu negxathu ukuthi lisetshenziswa kanjani. Okokuqala, uma sesifinyelele i-akhawunti yethu ye-Zoom, kuzoba ukubhekana ne- izilungiselelo kusuka ku-akhawunti yethu ngokuchofoza ku- «Isethaphu".
Kusuka kuzilungiselelo sizokwenza kusebenze inketho "Isikhwama esibonakalayo". Lapho nje le nketho seyenziwe yasebenza, lapho siqala ikholi yevidiyo ngokujoyina umhlangano noma ngokudala okwethu, singakhetha uhlobo lwesizinda esifuna ukusisebenzisa.
Kufanele sikukhumbule lokho isizinda esingemuva sizoba nomthelela uma kukhulunywa ngokusebenzisa eyodwa ebonakalayo. Ezindaweni ezifundelwe kuyinto ejwayelekile ukuba nesizinda esiluhlaza, esaziwa njenge-chroma. Ngokumelene nalesi sizinda kulula ukukhipha izithombe eziphuma ngemuva komuntu ophambi kwekhamera. Uma singenaso isikhwama esinjengalesi (okuzoba okujwayelekile) Ithimba lethu kuzofanela lilungise-software ukujula kwegumbi ukwazi ukusebenzisa isizinda esibonakalayo.
Kungaba njalo iqembu lethu alinawo amandla anele ukuyikhiqiza kuye ngobunzima isistimu ehlangabezana nabo, kepha njengomthetho ojwayelekile, ingemuva elibonakalayo livela ngisho nokusebenzisa i-smartphone. Uhlelo luhlangabezana nobunzima lapho isikhwama sethu sijule kakhulu noma uthole eziningi izithiyo bobunjwa noma osayizi abehlukene. Inhloso enhle ukuzibeka ngesizinda esibushelelezi Ngemuva. Sinenketho ye- lungisa ithoni yangemuva ukuze isithombe "esivelisiwe" sifanane kakhulu.
Lapho siqala ucingo noma sijoyina
Uma sesenze umhlangano, noma sesijoyine umhlangano owenziwe abanye abasebenzisi ...
1 - Kumele sikhethe ukujoyina ikhamera, imakrofoni, noma kokubili.
2 - Sikhetha isithonjana esivela engxenyeni engezansi kwesobunxele futhi lapho sikhetha inketho «Isikhwama Esibonakalayo»
3 - Kufanele siyihlole (kuya ngecala) inketho "Nginesikrini esiluhlaza" ukuze uhlelo lukwazi ukulungisa isizinda esibonakalayo kulowo osemuva kwethu.
4 - Sekuyisikhathi sokukhetha phakathi kwezinketho zezimali ezibonakalayo ezibonakalayo. Singakhetha kokukhona, silande okunye okungeziwe esikunikezwa uhlelo lokusebenza uqobo, noma uma sithanda, singakhetha isithombe sethu bese sisisebenzisa ngqo njengesizinda.
Kulesi sivivinyo sikhethe isithombe solwandle esingemuva kwesithombe, futhi yize i-engeli ekhethiwe ingeyinhle kakhulu, singathola ngokuphelele umbono wokuthi ingemuva libukeka kanjani ngesikhathi socingo lwevidiyo.
Ukulungiswa okulula ukunikeza isithombe esingcono
Njengoba ubona, ngezilungiselelo ezimbalwa ezilula zokumisa singanikeza isithombe sangemuva esihlukile, noma kungongoti ngaphezulu, noma uma kwenzeka sifuna ukusebenzisana nesizinda esithile esimnandi. Noma umane ukubeka ngemuva kwethu isizinda esithandayo nokuthi sifuna ukuhlanganyela nabanye abasekeli bengxoxo. Zoom ulungisa izidingo zethu futhi unikeza lokhu kungenzeka ukuthi indawo esisebenza kuyo ayithinti isithombe ukuthi thina project.
Njengoba sikuchazile, nnoma sidinga okungaphezulu kakhulu kwesizinda esisicaba ngangokunokwenzeka ukuze isoftware yohlelo lokusebenza ingatholi ubunzima, noma isitshele ngqo ukuthi isikhwama esikhethiwe asikwazi ukusetshenziswa. Okuhlangenwe nakho kuzothuthuka ngokuya ngesithombe sangemuva esisikhethayo, kuya ngezimo, futhi kuzoba njalo kusebenza kahle kakhulu futhi "kuchwepheshe" uma sikwazi ukubala nge-a ingemuva, ngaphezu kokubushelelezi, okuluhlaza okotshani. Okuthile uma sikwazi ukukuzama, sizobona ukuthuthuka okukhulu.
Bheka izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zamakholi wevidiyo weqembu
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungasisebenzisa kanjani isizinda esibonakalayo kumakholi wevidiyo we-Zoom
Ukukhishwa ku-Netflix, HBO nakuDisney + ngoMeyi 2020
Ungasebenza kanjani ngamafayela e-PDF ku-Microsoft Edge Chromium